Ngathi-Wuxi Co-Bona Ukupakisha Co., Ltd.
I-Wuxi CO-Bona ukupakisha yenye yezinto eziphambili kubenzi beiglasi, iimeko zeglasi kunye nezinto zeglasi kwishishini lokujonga. Ngaphezulu kweminyaka eli-10 yamava, i-Co-See ibonelela ngenkonzo ebalaseleyo, imveliso ekumgangatho ophezulu kunye namaxabiso okhuphiswano kwaye ikwabonelela ngobuchule bokuyila ukwenza iimeko ezizodwa kunye nezixhobo. Sisebenzisa ubuchwepheshe obuphambili, senza ulawulo lomgangatho oluqhubekayo nolungqongqo kwiimveliso zethu kuyo yonke inkqubo yokuvelisa, siyazi kakuhle into yokuba inkampani yethu igxile kwi-OEM kwaye iimveliso zethu zamkelwe kakuhle kwimarike ekhaya nakumazwe aphesheya. Ngokusebenzisana nenkampani yethu, siza kubona umhlaba oqaqambileyo!
1.Umthengisi weBrands Maui Jim, Costa, Spy, Komono, BCBG, Fielmann njl.
2.Contain iindidi zelanga, iiglasi izakhelo, iimeko umboniso, iimveliso iliso eyewear njl
3. I-OEM. Yamkela ubungakanani bexabiso lokuzama ukulingwa.
Amava e-4.10 +, i-CO-See ibonelela ngenkonzo ekhethekileyo.
Abathengisi be-5.Ubungcali, banikela ngeenkonzo zabathengi zeeyure ezingama-24 kwi-intanethi
Sinabathengi kumazwe angaphezu kwama-30 kwaye igama lethu elihle liphakathi kwabathengi abatsha nabadala.
Sizibophezele ekuboneleleni ngazo zonke iindidi zeglasi ezikumgangatho ophezulu kunye nokuyilwa kwezincedisi kunye neenkonzo zokuvelisa zabathengi behlabathi.
Amaqela ethu okuthengisa anobuchwephesha obuphezulu kunye nobungcali. Sinikezela ngeyure ezingama-24 ngenkonzo ekwi-intanethi kubathengi bethu abavela kwihlabathi liphela, bephendula imibuzo malunga nezinto, ubungakanani, ilogo kunye nolunye ulwenziwo lwephakheji.
Njengoko singumvelisi, sibonelela ngexabiso eliphantsi lokuthenga, ukuyeka ukuthenga kunye nokubeka iliso kumgangatho.
Sinikeza iphakheji yemveliso ekhawulezayo kunye nokuhanjiswa kwangexesha. Ukupakisha kwethu kuya kunciphisa ukonakala kweemveliso kwinkqubo yothutho nokusasazwa kangangoko kunokwenzeka, kuqinisekisa ukhuseleko lweemveliso, ukuququzelela ukugcinwa, ukuthuthwa, ukulayishwa kunye nokothulwa kwezinto, kunye nokukhawulezisa ukuhlolwa kwenqaku lokunikezelwa.
Ukubambelela ekuzinikeleni kwethu ekwaneliseni iimfuno zokupakisha zabathengi, siphonononga zonke iintlobo zamasimi ukudibanisa ubonelelo lwethu kunye nezixhobo, ukuze sinikezele abathengi bethu ngenkonzo yokuthenga enye, elona thuba lihle nelomeleza abathengi.